गहिरो पानीमा डुबेर प्रेमिकालाई प्रपोज गर्दा युवकको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकाको लुइसियानामा स्टेभिन बीबर गहिरो पानीभित्र आफ्नो प्रेमिकालाई बिहेका लागि प्रस्ताव राख्दै थिए तब पानीमा डुबेर उनको मृत्यु भयो । यो घटना त्यसबखत भयो जब बीबर आफ्नो प्रेमिका एन्टोइनेको साथमा छुट्टी मनाउन तान्जानियाको पेम्बा आइल्यान्ड गएका थिए ।
ॐ पर्वत !
एजेन्सी । हिन्दु धर्ममा आफ्नो महत्वपूर्ण स्थान राख्ने स्थान कैलाश मानसरोवरमा कैयौँ रोचक तथ्यहरु छन् । जसमध्येको एक हो सुर्योदयका समयमा त्यहाँको अचम्म लाग्दो दृष्य । जसलाई शव्दमा वयान गर्न कठीन छ ।
आइतबार जन्मिएका व्यक्ति भाग्यशाली हुन्छन्
काठमाडाैँ । जुन बार हाम्रो जन्म हुन्छ त्यस बारको स्वामीको असर हाम्रो उमेर भरिनै पर्ने गर्छ ।
मनी प्लान्टको बिरुवा घरको कुन भागमा लगाउँदा शुभ तथा अशुभ हुन्छ
एजेन्सी । घरको यो दिशामा मनिप्लान्ट राख्नुहोस, कहिल्यै धन सम्पतिको कमी हुने छैन घरको बास्तु दोष भगाउनको लागि हाम्रो धर्म शास्त्रहरुमा अनेकौ उपायहरु बताइएका छन्।
घरको मन्दिरमा मुर्ति र पुजाको सामान सही ढंगले सजाएको हुनपर्छ
एजेन्सी । बिहान बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् । तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन । घरमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी नै धेरै परम्पराहरु मान्दै आएको पाइन्छ । तर आजकालको आधुनिक युगमा धेरै मानिसहरुले पुराना परम्पराहरु मान्न छाडिसके ।
१४ महिनाकी बालिका जसलाई हरेक दिन चाहिन्छ १.५ लिटर कफी
एजेन्सी । सामान्यतया ५ वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरुलाई कफी पिउन मनाही गरिन्छ । तर इन्डोनेशियामा एक बालिका रहेकी छिन्, जसले हरेक दिन १.५ लिटर कफि पिउने गर्छिन् । अचम्मको कुरा के रहेको छ भने, बालिका अहिले भर्खर १४ महिना पुगेकी छिन् र यति मात्रामा कफी पिउँदा पनि उनी स्वस्थ रहेकी छिन् ।
विश्वकै सबैभन्दा रहस्यमयी ठाउँ ‘एरिया ५१’
एजेन्सी । एरिया ५१ को नाम सुन्नुभएको छ होला । सायद कतिपय मानिसहरुलाई यसको बारेमा जानकारी नै नभएको पनि हुन सक्छ र्। अमेरिकाको नेवादा मा रहेको यस ठाउँ विश्वकै सबैभन्दा रहस्यमयी ठाउँ मानिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस ठाउँको विषयमा चर्चा भएको छ ।
यस्ता व्यक्तिको हातमा पैसा परे पनि खर्च भइहाल्छ, बचत गर्नै सक्दैनन्
एजेन्सी । शास्त्रका अनुसार शरीरमा कोठीको निकै महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । तपाइँले जति पैसा कमाएपनि तपाइँका यी अंगमा कोठी छ भने हातमा पैसा टिक्दैन । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार शरीरका विभिन्न भागमा हुने कोठीले फरक फरक फल दिन्छन् । तर कतिपय भागमा कोठी भएमा तपाइँसँग भएको पैसा खर्च हुने वा जाने हुन्छ ।
सर्प नपाइने देश र यसको रहस्य
एजेन्सी । ब्राजिललाई ‘सर्पको देश’ पनि भन्ने गरिन्छ । किनभने ब्राजिलमा अत्यधिक संख्यामा सर्प पाइन्छ जहाँ अन्य विश्वका कुनैपनि देशमा त्यति संख्यामा सर्प पाइँदैन । तर विश्वमा यस्तो देश पनि रहेको छ जुन सर्प विहीन अर्थात त्यस देशमा एउटा पनि सर्प पाइँदैन ।
के तपाईलाई भुटानका यी धनी व्यक्तिहरुबारे थाहा छ ?
एजेन्सी । सानो र सुन्दर देश हो भुटान । पर्यटकको मुख्य गन्तव्यमा पनि भुटान पर्ने गर्छ । राजतन्त्र रहेको भुटानका बारेमा धेरै कुरामा बाहिर आउँदैनन् । यस देशमा रहेका धनी व्यक्तिहरुको बारेमा पनि कमै चर्चा हुन्छ ।